ပူပြင်းလွန်းတဲ့နွေရာသီမှာ အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်မလဲ ? – YANGON STYLE
ပူပြင်းလွန်းတဲ့နွေရာသီမှာ အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်မလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံနွေဥတုပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့လာပါပြီနော်။ ရန်ကုန်ဆိုတာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီဥတု ပူတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Ozone လွှာတွေကလည်းပါးလာပြီး ကမ္ဘာ့ လူဦးရေကလည်း များလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် UVA /UVB ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေ အဆမတန်ကို ကျရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ နေလောင်တယ်ဆိုတာ ရိုးရိုးအလှအပဆိုင်ရာ ပြဿ နာသေးသေးလေး မဟုတ်ပါဘူး။ အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း/ အရေးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း/ အရေပြားကင်ဆာ နဲ့ မျက်စိတိမ်စွဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အင်မတန်ကို အန္တရာယ်များလှတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေရောင်ခြည်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားရင်း နွေရာသီမှာလည်း ကျန်းကျန်းမာမာနှင့် ဆက်လက်လှပနေစေဖို့ အချက်လေးတွေကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
1.ရေများများသောက်ပါ။ တစ်နေ့ကိုရေဖန်ခွက် အနည်းဆုံး ၈ ခွက်သောက်ပါ။
2. နေရောက်ကာ cream များဖြစ်သော Sunscreen, sun lotion, sun block တို့ကိုမဖြစ်မနေသုံးပါ။ SPF 50+++ ပါဝင်မှ ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်မှာပါနော်။ Sunscreen ကိုနေပူထဲမသွားခင် မိနစ် 30 ကြိုတင်လိမ်းပါ။ Sun spary ကိုလည်း သတိရတိုင်းဖြန်းပါ။
3. ရောင်ပြန်လွယ်သော အရောင်ဖျော့အရောင်နု နှင့် အေးပြီး ပေါ့ပါးချောင်ချိသော အဝတ်အစားများကိုသာဝတ်ဆင်ပါ။ ချည်ထည်များက အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထီး နှင့် နေလုံသော ဦးထုတ်ကို ဆောင်ထားပါ။
4. နေကာမျက်မှန်ကို မဖြစ်မနေတပ်ပါ။
5. ချွေးထွက်လွန်တတ်သဖြင့် အသီးဖျော်ရည် နှင့် ဓါတ်စားရေသောက်ပါ။
6. နေပူချိန်အပြင်းဆုံးဖြစ်သော မနက် 10 နာရီမှ ညနေ 3နာရီခွဲလောက်အထိကို အတတ်နိုင်ဆုံး အပြင်ထွက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။ မဖြစ်မနေ မပြင်သွားရမည်ဆိုလျှင် 2/3/4 အချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော် ။
7. နေလောင်ခံရပြီဆိုရင်တော့ သဘာဝအကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်တဲ့ သနပ်ခါး လိမ်းပါ။နောက် Aloe Vera မှာထုတ်လုပ်သော Snothing gel/ cream များကိုသုံးပေးပါ အင်မတန်ထိရောက်ပါတယ်နော်။ ရေဓါတ်များသော ရေဓါတ်ကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားသော Cosmetic များက နွေရာသီမှာ အသားအရေတိုင်းအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ Scrub တို့ peeling တို့လုပ်ခြင်းကလည်း နေလောင်ထားခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်နော်။